Alarobia 16 Septambra 2020
Talata 15 Septambra 2020
Usb Flash Drive eClip no voalohany fanoratana ny flash USB USB eran-tany miaraka amin'ny mpitondra metric. Nomem-boninahitra ny Silver iDA & Golden A 'Design Award ny eClip. Maivana ny eClip, mifanaraka amin'ny fanalahidy sy fiasa toy ny tsipika taratasy handaminana ny volanao, fandraisana sy volanao. Miaro ny angon-drakitra manokana, fananana ara-tsaina, data momba ny mpampiasa, data ara-pitsaboana ary tsiambaratelo momba ny varotra ny eclip. eClip dia noforonin'i Frohne any Florida. Ny mpampifandray izany fahatsiarovana volamena izany dia mahatohitra ny fahatafintohinana, miorim-bolo, tsy mahatohitra ny rano, manohitra ny alikaola, ny vovoka, ny tahan-tady, ary ny tahan'ny elektromagnetika.
Alatsinainy 14 Septambra 2020
Herinaratra Vatan-tsiro an'ny herinaratra miaraka amin'ny tànana mitroatra. Ity gadra ity dia manana mahazaka mihodina ny 360 ° ary mijanona eo amin'ny zoro efa voalaza. Amin'ny ankapobeny, ny olona dia manapaka hazo amin'ny fiolaka na manondro amin'ny alàlan'ny familiana ny tsofa amin'ny zoro sasany na miketrika na mametaka ny vatany. Mampalahelo fa matetika ny tsimoramora avy amin'ny tanan'ny mpampiasa na ny mpampiasa dia tsy maintsy miasa amin'ny toerana tsy fantatra, izay mety hiteraka ratra. Mba hamaritana ireo lesoka toy izany dia napetraka miaraka amina fihodinana mihetsika ny vatan-kevitra naroso mba hahafahan'ilay mpampiasa manitsy ny zoro tapaka.
Asabotsy 12 Septambra 2020
Zoma 11 Septambra 2020
Firavaka Hitantsika ny ady lalandava misy eo amin'ny tsara sy ny ratsy, ny maizina sy ny mazava, andro aman'alina, korontana sy filaminana, ady sy fandriampahalemana, mahery fo sy olo-malaza isan'andro. Na manao ny fivavahanay na firenentsika, dia nolazaina anay ny tantaran'ny mpiara-miasa amintsika lalandava: anjely mipetraka eo an-tsorokay ankavanana sy demonia eo ankaviany, mandresy lahatra antsika hanao soa sy mirakitra ny asa tsara ny anjely. manao ratsy ary mitandrina ny asa ratsy nataontsika. Ny anjely dia fanoharana ho an'ny "superego" misy antsika ary ny devoly dia mijoro amin'ny "Id" ary ny ady lalandava eo amin'ny feon'ny fieritreretana sy ny tsy fahatsiarovan-tena.
Kalandrie Usb Flash Drive Herinaratra Haingon-Tsosotra Ny Kalandrie Firavaka